द्वन्दकालको बालापन । – Everest News Nepal
द्वन्दकालको बालापन ।
June 8, 2020 Everest News कला/साहित्य 0
जेष्ठ-२६, काठमोण्डौँ । जन्म मध्यपश्चिम्को रुकुम जिल्लामा भएको हो । जसलाई अहिले पुर्वी रुकुम र पश्चिम् रुकुम भनेर भूगोलको आधारमा विभाजन गरिएको छ । अझ मेरो जन्म स्थान ठ््याक्कै रुकुमकोट, हालको पुर्वी रुकुम ।
प्राकृतिक सुन्दरतासंगै जोडिएको रुकुमको अर्को उपनाम हो, माओवादीको जन्मथलो ।
रुकुमसङ्ग जोडिएको अर्को छिमेकी जिल्ला रोल्पा । माओवादीको उद्गम स्थलकोको नामले चिनिदैआएको यी दुई जिल्ला, रुकुम अनि रोल्पा ।
रुकुम शब्द हरेक नेपालीको लागि माओवादी जन्मेको पर्याय शब्द हो । नजोडियोस पनि कसरी २०६२ र ६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट २५० वर्ष भन्दा लामो इहिास बोकेको राजतन्त्र हत्याउन यीनै भूमिमा जन्मेको सपुतहरूको बलिदानको उपज हो ।
राजतन्त्रको विरुद्ध आवाज उठाउने र लड्ने रुकुम, रोल्पा, सल्यान , बग्लुङ, म्याग्दी लगायत अन्य थुप्रै ठाउँका सयौं युवाहरू (महिला पुरुष दुवै) तथा साधारण जनता समेत माओवादीका नाममा मारिए । विपत्ता पारिए ।
कति नाबालक टुहुरा भए, कति आमाहरुले कोख रित्त्याए, कति नारिका सिउदो पुछियो, सयौंले रगतको खोलो बगाएर आफ्नो जीवनको आहुति दिए । सुन्दा कता कता कुनै एकादेशको कथा जस्तो लागेपनि २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म रुकुमबासीले भोग्नु परेको शास्वतः पिडा यहि नै थियो ।
म सानी अबोध बालिका, त्यतिबेला सधैं मेरो मनमा एउटै प्रश्न उब्जिन्थ्यो, मरिन्छ कि बाचिन्छ । यो बहेक अरु सोच्न सक्ने क्षेमता मसंग थिएन किनकी मेरो बालपन दिमागले धेरै सोच्न सक्दैन्थ्यो ।
आज या भोलि मरिन्छ, ठेगाना थिएन । माओवादीहरूलाई मार्नको लागि सेनाको हेलिकप्टरले ठाउँ–ठाउँमा बम खसालेको यी नाङ्गा आँखालेले प्राय देख्नु पथ्र्यो । घरका धुरी धुरिमा ठुलाठुला हेलिकप्टर घुम्थे, कराउथे ।
त्यो दृश्यले मुटु काप्थ्यो। कतिखेर कहाँ नेर बम खसाल्छ थाहा नै हुदैनथ्यो । घरको चौतर्फी हवाई हमला भइराख्थ्यो ।
भनिन्छ नि जिन्दगी पढ्ने होइन भोग्ने कहानी हो । त्यस्तै जनआन्दोलनको हिँस्रात्मक घटना किताबका पानामा पढेका भन्दा धेरै कष्टकर तरिकाले देखेकी र भोगेकी छु बालपनमा नै ।
आज ती दिनहररूलाई स्मरण गर्दा हजारौं प्रश्न उब्जिन्छन मनमा । अनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ त्यतिबेलाका कमान्डरहरूलाई अर्थात अहिलेका नेताहरूलाई ।
रगतको खोलो बगाएर सयौं जनताले आफ्नो जिवनदान त गरे । गणतन्त्र पनि ल्याए, तर पछि तिनिहररूले के पाए ? आन्दोलनमा जीवन आहुति दिएकाहरू कतिले सहिद घोषणा भए र उनका परिवारले राहत पाए ? कति अहिलेसम्म पनि वेपत्तामा रहे ?
कुटो, कुदालो, अनि घास दाउरा गर्दै लेक बेँसी मेलापातगर्दै एउटा जीवनको रस अनि लयमा बाँचेको निमुख जनता एकाएक परिवर्तनको नाममा बन्दुक बोकेका हातहरू अहिले कस्ता भएकाछन् होला ?
परिवर्तनका धुनसंगै क्रान्तिका गीत गाउने गलाले अहिले एक गाँस खान पाएका छ्न कि छैनन् होला ? यस्ता हजारौं प्रश्न उब्जिरहन्छ मनभरी । सम्झिदा मात्रै पनि कहाली लाग्छ कति अझै । रुन्छ मन धरधर । म एक नाबालक युद्ध दर्शीको पिडा त यस्तो । अझ स्वयम लड्नेहरूको दिनचर्या र मनस्थिति कस्तो होला ।
तर के गर्नु बिडम्बना त्यै त हो नि । बाचुन्जेल सम्झनाको निशानी मरेपछी माटो र खरानी भने जस्तै । देश परिवर्तनका बेला मर्ने मरेर गइहाले बाचेकालाई वास्ता छैन ।
कुनै समय यस्तो थियो रुकुम, हरेक दिन आकाशमा हेलिकप्टरबाट बम बारुद बर्षिन्थ्यो, जमिनमा माओवादी तीतरवितर हुन्थे । कहिले लत्थो लागेर भागाभाग गर्थे । आफू बाच्नको लागिहोला घरघरमा थर्काउदै खाने र बस्न बाध्य थिए माओवादीहरू ।
उनीहररूको लागि न खानको टुङ्गो थियो न बस्नको लागि बासको ठेगाना । यसरी भोकभोकै आन्दोलनमा उत्रिरहे र १७ हजार भन्दा बढिले ज्यान गुमाए ।
अपसोच मेरै परिवारका सदस्य पनि सहिद भए । देशमा केबल नाम मात्रै परिवर्तन भयो ।
शासन,सत्ता र व्यवस्था उही रह्यो । परिवर्तनको लागि जीवन अहुति दिनेहरूको सपना ज्यूँउका तिँउ रहेपनि अमर सहितहरूकोे आत्माले सधौ शान्ती पाओस । अन्तरआत्मबाट चिरशन्तीको कामना ।
अनि बाचेकालाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, अहिले के गर्दैछन् होला ती आन्दोलनकारीहरू ? द्धन्दमा होमिएर के पाए होलान ?
के उनिहरुले चाहेको देशमाको परिवर्तन यहि हो ?
देश परिवर्तन गर्ने बाहानामा केही नेताहररू त कुर्सीको मोह लागेर कुर्सी तानातान गर्दैमा ठिक्क छन् । तर आन्दोलनमा उत्रिएका गरिब जनताले के पाए ?
कुर्सी मोहमा हरबखत लडिरहेको नेताहरू त्यो कुर्सीसम्म पु¥याउनु जीवन आहुति गरेका आमसहिदहरूका सपनाप्रति कतिको सचेतछन ? कतिले सोच्छन ?
युद्धबाट जनता र देश विस्तारै शान्तिमा त आयो। प्रजातान्त्रिक मुलुक हटेर गणतान्त्रिक नया मुलुक पनि बन्यो । तर गरिब जनताका दुख सकिएनन् । युद्धमा बाचेकाहररूको शरीर भरी गोलिका डोप र छियाछिया पिडाहरू बोकेर जिइरहेकाछन्।
तर पनि उनिहररूका आशाका सपना अझै जिवितै छन् ।
एलिना केसी पत्रकारीता विषयका विद्यार्थी हुन् ।
About Everest News	248 Articles
ललितपुरमा ३८ वर्षीय पुरुषको विभत्स हत्या
Agency. Dayak women have their own meaning or meaning in calling names. From time to time, it is inseparable from the traditional culture of the […]
केही खुकुलो सहित एक हप्ता निषेधाज्ञा थपियो थप
३० जेठ, काठमाडौं । उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ । जेठ मसान्तसम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई थप एक साता बढाउने निर्णय भएको हो । काठमाडौं, भक्तपुर […]
कोच अल्मुतारीलाई कतार फुटबल एसोसियसनले नेपालको फुटबलको बिकासको लागी, एन्फासॅंग सहकार्य गरेर एक बर्षको सम्झौतामा उपहार स्वरुप नेपाललाई कोचिङको लागी पठाएको हो । जबकि अल्मुतारीको […]
What looked likearock on the surface wasagiant statue discovered on Easter Island this week, The ones not buried have been weathered […]
चुरे पहाडको एतिहासिकता
चुरेलाई शिवालिक भनिन्थ्यो । पुराना वैज्ञानिक अध्ययनहरूमा शिवालिक क्षेत्र भनिएको छ । भगवान शिवको बास भएकाले शिवालिक भनिएको तर्क गरेका छन् भारतीय वातावरण वा भूगर्भशास्त्रीहरूले […]